Shukulaatada WASC (Cake Mix Cake) - Keega
Shukulaatada WASC Cake (isku darka keega shukulaatada la duubay)
Shukulaatada WASC waa habka ugu fudud ee loo sameeyo sanduuqa isku dhafka ah sida xoq
Shukulaatada WASC waa nooca shukulaatada ee noo caan ah Cunto WASC in lagu daro waxyaabo kooban, keegaga sanduuqa ayaa dhadhamin doona sida xoqitaanka oo kale. Dareenku waa mid fudud oo qalafsan laakiin weli waa adag yahay in lagu xardho keegga ama lagu duugo keega arooska. Shukulaatada WASC waa ikhtiyaar aad u fiican haddii aadan si buuxda diyaar ugu ahayn qaadashada quudinta dubista a karinta keega shukulaatada ka xoq.
Cake Shukulaatada dhanaan
Mid ka mid ah maaddooyinka ka dhigaya keeggaani mid aad u wanaagsan ayaa ah labeen dhanaan. Waxay ku daraysaa dhanaan fiican dhadhanka iyo heer dheeraad ah oo qoyaan ah. Kareemka dhanaan waa maado caan ah oo loo isticmaalo in badan oo ka mid ah cuntooyinka keegga shukulaatada ah oo siinaya dhadhan la mid ah oo aad ka heli karto isticmaalka caano-maalmeedka ama majones.
Cake Shukulaatada leh Kafee
Waxaan jecelahay inaan kafeega u isticmaalo dareerahayga halkii aan ka isticmaali lahaa biyo maxaa yeelay kafeeku wuxuu keenaa dhadhanka shukulaatada. Duufaantaadu waxay urin doontaa sida kafee adag laakiin ha ka welwelin, dhadhamin maayo sida kafeega. Uma baahnid inaad isticmaasho kafee, waxaad isticmaali kartaa biyo ama xitaa caano haddii aad rabto.
Sida Loo Sameeyo Shukulaatada WASC
Shukulaatada WASC waxay ku bilaabataa isku darka sanduuqa shukulaatada-y ee wanaagsan. Caadi ahaan waan isticmaalaa Duncan Hines shukulaatada fudge fudge laakiin shayaadiinta cuntada keega ayaa waliba si fiican u qaban doonta. Kaliya ku shub waxyaabaha ku jira isku darka baaquli kuna dar walxahaaga dheeriga ah. Kaliya iska indho-tirka tilmaamaha ku yaal dhabarka sanduuqa oo u isticmaal qashin-qorka hoose.
Isku qas dhammaan walxahaaga illaa inta aad isku dareyso ka dibna xoog u walaaq laba daqiiqo. Waxaan u adeegsaday mishiinka istaagga oo ku lifaaqan ku-xirnaanta suunka laakiin sidoo kale waad isticmaali kartaa uun baaquli iyo qaaddo.
Waxaan u rogay qormadan si ay uga koobnaato subag la dhalaaliyay si marka aad u qaboojiso keega uu xoogaa u adkeeyo una fududahay in la maareeyo.
Maxaa diidaya in uun laga soo bilaabo xoq?
Aad ayaan u helayaa su'aashan. IN badan Waan gartay. Haddii aad mari doontid dhibaatooyinkan oo dhan ee ku darista waxyaabo badan oo isku dhafan sanduuqa, maxaa diidaya oo keliya inaad ka sameysid xoq? Waxaan u fikiri jiray isla wax. Laakiin sanado badan oo aan wax barayay kuwa wax dubaya oo aan tiro lahayn oo dhammaan heerarka xirfadeed ah, waxaan bartay in dad badan ay cabsi weyn ka qabaan inay wax ka dubtaan xoqan. Wax yar ayey u leeyihiin aqoon la’aanta sida loo cabiro, sida la isugu qasbo ama xitaa sida keegga xoqista fiican ay u dhadhamayso.
Waxyaabaha ku saabsan isku-darka sanduuqa ma aha oo keliya maaddooyinka la midka ah ee keeg ka soo xoq. Sanduuq waxaa ku jira emulsifiers oo asal ahaan ka dhigaya keega si fiican u karis si kasta oo aad ku sameyso. Dhibaatada? Emulsifiers-yada waxay keega ka dhigayaan keegga xoogaa been abuur ah. Sida cunista nacnac dhadhan dhadhan leh. Way fiicantahay laakiin si sax ah uma dhadhamiso sida saxda dhabta ah 'strawberry'?
Marka ku darista waxyaabahan dheeriga ah waxay ku siinaysaa kan ugu fiican labada adduun. Cunto karis ka dhigaysa rootiga inuu sameeyo wax ka badan kaliya inuu furo sanduuqa laakiin emulsifiers-ka ayaa wali hubinaya in keegga si guul leh u dubay iyo waxyaabaha ku darsaday ayaa ka dhigaya keegga inuu u dhadhamo sidii guriga oo kale. Sidaas darteed rootiga siinaya kalsooni aad loogu baahnaa iyo xoogaa dhadhamin ah waxa keegga guriga lagu sameeyo dhadhankiisu sidaas oo kale haddii ay doortaan inay ka boodaan boodbo laba dubis ah oo ka soo xoqda, ma aha wax cabsi badan.
maxaa ku dhacay bob sagets cod
Cake Chocolate Shukulaatada Loogu talagalay Kukiyada
Cuntadani waxay si fiican ugu shaqaysaa koobabka iyo si fiican u kac. Waxaan kahelaa hal sanduuq qiyaastii 36 koob oo keega ah.
Waxaan jeclahay isticmaalka my shukulaatada buttercream karintaan. Noocyada dhadhanka macaan waxay si fiican ugu wada jiraan keega shukulaatada iyada oo aan aad u cusleyn. Haddii aad raadineyso raashin kale oo keega shukulaatada yummy ah, iska hubi my keega biin guinness taas oo ah astaanta hufnaanta.
Cunnooyinka kale ee laysku daro ee sanduuqa isku dhafan ee aad isku dayi karto!
WASC (keega cad ee yicibta cad)
Cunto karinta isku dhafan ee Strawberry
Kani waa nooca shukulaatada ee karinta WASC. Laga bilaabo isku darka sanduuqa oo aad ku darto waxyaabo dheeri ah oo dheeri ah, waxaad ka heli kartaa keeg dhadhamin aad u fiican oo bir ah oo dhadhaminaya sida xoq. Shhh ma sheegi doono. Cuntadani waxay ka dhigeysaa labo 8 'keega wareega ah oo dhererkoodu yahay 2'. Waqtiga Diyaarinta:5 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:35 daqiiqado Kalori:390kcal
Cunto WASC Chocolate ah
▢1 sanduuqa (1 sanduuqa) Duncan Hines Shukulaatada Fudge Cake Mix
▢5 oz (142 g) Burka Ap 1 koob
▢laba oz (57 g) budada kookaha 1/2 koob
▢12 oz (340 g) kafee qabow 1 1/2 koob
▢laba oz (57 g) saliidda cuntada 1/4 koob
▢4 oz (113 g) sabdo dhalaalay 1/2 koob
▢3 weyn (3 weyn) ukunta
▢6 oz (170 g) labeen dhanaan 3/4 koob
▢7 oz (198 g) sonkorta 1 koob
▢1 tsp (1 tsp) cusbo
▢1 Tbsp (1 Tbsp) soosaarida vanilj
▢16 ounces Shukulaatada Semi-macaan
▢16 ounces kareemka karbaashka culus
▢1/2 qaaddo shaaha cusbo
Tilmaamaha WASC Shukulaatada
Kuleyli foornada ilaa 335 ℉. Diyaarso laba 8 'digsi keega wareega ah. Waxaan door bidaa inaan isticmaalo keega.
Ku dar dhammaan walxaha qalalan baaqulika mashiinkaaga istaag leh oo leh lifaaq dabacsan. Ku dar inta ka hartay maaddooyinkaaga oo isku walaaq si hoose illaa 1 daqiiqo.
Joogso oo xoqii baaquli ka dibna isku qas dhexdhexaad ilaa laba daqiiqo.
Ku shub baytarkaaga digsiyadaha keega oo dub ilaa 30- 35 daqiiqadood ilaa caday ka soo baxayo bartamaha iyada oo xoogaa jajabyo ah oo dheg dheg ah ay ku dhegsan yihiin cadayga.
Ha ku qaboojiyo dhowr daqiiqo digsiga ka hor inta aanad u rogin sagxadda qaboojiyaha. Qabooji si buuxda oo dhaxan.
Dhig kareemka culus ee karbaashka ah dheriga cabirkiisu dhexdhexaad yahay kuleylka dhexdhexaadka ah. Marmar foox mar si looga hortago gubashada. Ha fogaanin!
Kareem kululeyso illaa uumi ka kacayso dusha sare laakiin ma karkaraya.
Shukulaatada ku shub kariim kulul oo ha fadhiisan 5 daqiiqo
Ku dar milix kuna xoq ilaa aad ka simayso. Haddii aad leedahay wax buro ah oo aan dhalaalin, waxaad isticmaali kartaa isku-darka miraha si aad uga soo saarto.
Shukulaatada ku shub saxan gacmeed oo ku dabool duub balaastig ah ha ku qaboojiyo heerkulka qolka illaa inta ay le'eg tahay subagga looska Haddii shukulaatada ay aad u adag tahay, waxaad microwave kartaa 10 ilbidhiqsi ka dibna waxaad ku walaaqi kartaa spatula ama karbaashid qasacad gacmeed.
Keeg dhaxan sida la doonayo.
Ha ka welwelin mid ka mid ah maaddooyinka ku yaal dhabarka sanduuqa, kaliya isticmaal maaddooyinka ku taxan habka cuntada. Cuntadani waxay ka dhigeysaa dufan ku filan seddex '6'x2' keega ama laba keega 8'x2 '(wareega). Cuntadani waxay ka dhigeysaa 40 koob oo buskud ah oo leh qiyaastii 1.25 wiqiyadood oo qasacad ah koobkii keegga ah. Waxaad ku isticmaali kartaa biirka mugdiga ah meesha kafeega ama biyo caadi ah.
U adeegida:1g|Kalori:390kcal(labaatan%)|Kaarboohaydraytyada:38g(13%)|Protein:5g(10%)|Dufan:26g(40%)|Dufan Dufan:shan iyo tobang(75%)|Kalastarol:67mg(22%)|Sodium:353mg(shan iyo toban%)|Kaliumperyamper:250mg(7%)|Fiber:3g(12%)|Sonkor:22g(24%)|Vitamin A:488IU(10%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyam:68mg(7%)|Bir:3mg(17%)
Ciyaartii Hore ee Duuliyaha Kursiga ayaa laga reebay Mid ka mid ah Bandhigyadii ugu Muranka Badnaa
Recipe Muraayada Cake Muraayadaha
Wareysi: Ashley Lynn Barrett On Voicing Zia From Bastion
Dhulka Dhexe: Hooska Mordor wuxuu muujiyaa Talion; Waxa ugu Yaabka Badan ee Mordor (Video)
Talyaani Meringue Buttercream
dubista keega vanilj ka xoq
shane dawson iyo willow smith video
sida loo dhigo ubax cusub keegga
wax kasta oo soo socda netflix may 2018
Daawo Waxa Dhacaya Marka Ragga Gayga Taabanaya Siilka Markii Ugu Horeysay
Genitalia waa madadaalo.
Spider-Man wuxuu ku dhexjiraa Kabtankii ugu dambeeyay ee Mareykanka: Raadiyaha Dagaalkii Sokeeye
Filimkan dhaadheer waa mid aad u fiican runtii laakiin, waa inaan dhahaa, #Donald4Spiderman.
Halle Berry waxay ka tarjumaysaa Fursado La’aan ka dib Oscar Win, Waxay Ka Hadashay Sumcadda Filimada Catwoman
Halle Berry waxay sameysay taariikhda Abaalmarinta Akadeemiyada 2002 kadib markii ay ku guuleysatay Jilaaga ugu Fiican doorkeeda Monsters Ball, laakiin iyadu ma bixin doorar badan kadib.